MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardMPT Money FAQs mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
1. MPT Money ဆိုတာဘာလဲ။
MPT Money ဆိုသည်မှာ မြန်မာပြည်အတွင်း အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ငွေလွှဲပို့နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ အကောင့်အတွင်း ငွေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်းများကို MPT Money အကောင့်မှတဆင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
2. MPT Money ကိုဘယ်သူတွေအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်ခဘယ်လောက်ပေးရပါ့မလဲ။
MPT, Telenor, Ooredoo နှင့် MyTel မည်သည့် ဆင်းကဒ်သုံးစွဲသူမဆို MPT Money ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ကြေးကတော့အခမဲ့ပါ။
3. MPT Money အကောင့်ထားရှိခြင်းရဲ့အားသာချက်တွေက ဘာလဲ။
MPT Money အကောင့်ဖြင့် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ – MPT Money အကောင့်အချင်းချင်းငွေလွှဲခြင်း (P2P) – ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း (မိမိဖုန်း/ အခြားဖုန်း) – ဈေးဝယ်ခြင်းများ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ငွေပေးချေခြင်း – ဘီလ်ကျသင့်ငွေများ ပေးချေနိုင်ခြင်း – ATM စက်မှ ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း – ငွေသွင်း/ ငွေထုတ် လုပ်နိုင်ခြင်း
4။ MPT Money အကောင့်ကို ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရမလဲ။
“ MPT Money အက်ပလီကေးရှင်းမှ
Step 1: Sign Up Now ကိုနှိပ်ပါ။
Step 2: အကောင့်ပြုလုပ်မည့် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အမည် ကို ဖြည့်ပါ။
Step 3: မှတ်ပုံတင်ရန်အကြောင်းကြားသည့် စာတို (SMS) မှ PIN နံပါတ်ဖြင့် အကောင့်ကို စတင်ပါ။
Step 4: အကောင့်ဖွင့်ပြီးကြောင်း အတည်ပြုသည့် စာတို (SMS) ရရှိပါက MPT Money ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
USSD Menu မှ
Step 1: *999# ကို နှိပ်၍ ခေါ်ဆိုပါ။
Step 2: ဘာသာစကားရွေးချယ်မှုပြုလုပ်ရန် မြန်မာဘာသာ အတွက် 1ကို နှိပ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာအတွက် ဆိုပါက2ကို နှိပ်ပါ။
Step 3: မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အတည်ပြုရန် 1 ကို နှိပ်ပါ။
Step 4: သင်၏အမည်ကို အင်္ဂလိပ်လို ဖြည့်ပါ။
Step 5: အမည်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရန် 1 ကို နှိပ်ပြီးလျှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို အကြောင်းကြားသည့် စာတို (SMS) ရရှိပါလိမ့်မည်။
Step 6: အကောင့်စတင်အသုံးပြုရန် *999# ကို ခေါ်ဆို၍ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။
Step 7: အကောင့်ဖွင့်ပြီးကြောင်း အတည်ပြုသည့် စာတို (SMS) ရရှိပါက MPT Money ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။”
5 . PIN နံပါတ်မေ့သွားလျှင် ဘယ်ကိုဆက်သွယ်ရပါ့မလဲ။
MPT သုံးစွဲသူများသည် Customer Care နံပါတ် 999 ကို ခေါ်ဆို၍ သို့ Agent Care နံပါတ် 990 ကို ခေါ်ဆိုမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။ အခြား မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲသူများ မှ 012323990 သို့ခေါ်ဆိုမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
6 . IMPT Mobile Money ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောင်းလဲလို့ရနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ MPT Mobile Money အကောင့်ကို ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောင်းလဲချင်ပါက Customer Care 999 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါ။ နံပါတ်ပြောင်းလဲမှု အတည်ပြုပြီးစီးပြီးနောက်တွင် SIM ကဒ်အသစ် သို့ အကောင့်ထဲတွင်ရှိသော ငွေများကို လွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
7. MPT Mobile Money အကောင့်က မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပါသလဲ။
ကျေးဇူးပြု ၍ Customer Care 999 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး သင့်ရဲ့ ဖုန်းပျောက်ဆုံးကြောင်းကို အကြောင်းကြားပေးပါ။ Customer Care မှ တာဝန်ရှိသူက သင့် ရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို အတည်ပြု ပြီး၊ သင့်ရဲ့ အကောင့်ကို ယာယီ အသုံးပြုခွင့် ရပ်နားထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ SIM ကဒ် အစားထိုးရရှိပြီးချိန်တွင် သင့်အကောင့်ကို ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ရန် Customer Care ကို ဆက်သွယ်ပါ။
8. MPT Mobile Money ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့လုပ်ကိုင်လိုပါက မည်သူ့ထံဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပါသလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ Customer Care 999 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်ကြောင်းကို ပြောပြပါ။ သို့မဟုတ် MPT Mobile Money Customer Care Teamရဲ့ Email ဖြစ်တဲ့ [email protected] သို့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အကြောင်း ကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ MPT Money Sales & Distribution ဌာနက သင့်ထံ သို့ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
9. MPT Money အကောင့်မရှိတော့လျှင် MPT Moneyကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
သင့်၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ဖြင့် MPT Money ကိုယ်စားလှယ်နေရာများတွင် ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
10. MPT Money ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာဘာလဲ။
“ MPT Money ကိုယ်စားလှယ် ဆိုသည်မှာ MPT Money ဝန်ဆောင်မှုအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြပေးနိုင်သူ ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်သူ ဖြစ်သည်။ – သင်၏ MPT Money အကောင့်မှ ငွေသွင်းခြင်း၊ ငွေထုတ်ခြင်း၊ – ဘောက်ချာဖြင့် ငွေထုတ်ခြင်း၊ – ကိုယ်စားလှယ်မှ တဆင့် ငွေလွှဲခြင်း – သုံစွဲသူအကောင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း”
11. MPT Money ကုန်သည် ဆိုတာဘာလဲ။
MPT Money ကုန်သည် ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းများအတွက် MPT Money ဖြင့် အီလက်ထရောနစ် ပိုက်ဆံကို လက်ခံပေးနိုင်သူ ဖြစ်သည်။